ILondon Ukuya EParis In 2:20 amahora Ngu-Eurostar Sitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > ILondon Ukuya EParis In 2:20 amahora Ngu-Eurostar Sitimela
Isikhathi sokufunda: 10 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 14/05/2020)
Omunye ezivamile nezindlela elula ukuhamba phakathi naseParis kuyinto nge Eurostar, isitimela ngesivinini yokuxhuma izihloko ezimbili. Nakuba zikhona plethora ongakhetha zabahamba ngifuna ukwenza hop, i-Eurostar ihlala omunye okukhethwa best for isivinini, izindleko, futhi kalula. Isitimela asizakale Umhubhe kwamanzi isiteshi, noma “chunnel,” eyakhelwe phakathi naseFrance ukuze uthole wena impela uya khona.
ngezansi, ungathola yonke imininingwane uzodinga usizo ukuphatha London yakho eParis Eurostar uhambo.
Lesi sihloko sabhalwa ukufundisa amakhasimende mayelana travel isitimela esenziwa Gcina Isitimela, Iwebhusayithi Amathikithi Eshibhe kakhulu Eshibhile EYurophu.
Kungani Izikhangibavakashi Europe ngu zemininingwane?
Ngaphambi kokuthi uqale, ake sibalo sika ncamashi kungani Europe engcono sabhekana nge- travel isitimela- ngemva kwakho konke, lokhu zwekazi liye owakhiwe ngenjongo ezinkulungwaneni zeminyaka, okusho ingqalasizinda yayo ngokuvamile athuthukile. Okunye zezokuthutha atholakala kalula, kodwa kukhona into ishiwo for nokuyenga grand ikhambo isitimela. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngenxa kokuqala abahambi, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Lokhu kwehluke kakhulu esijulile zezindiza yaseYurophu, lapho okungenani ukufika isikhathi sakho ngaphambi sokusuka amahora okungenani amabili, futhi uchitha isikhathi esengeziwe nemali beya indawo sezindiza.
Ekhuluma isikhathi sokuhamba, Europe baziwa kakhulu ngokungathathi-high-speed yayo nojantshi, okuyinto kakhulu kwalawo motorways yalo emazombezombe futhi zezindiza inconveniently elise. Izitimela kulo lonke leli zwekazi ziyashesha futhi ngokuvamile oqondile, okusho isikhathi beya futhi isikhathi esiningi ukuhlola.
Iziteshi zezitimela futhi sethubeni kokuba eseduze ukuba ezinkulu izivakashi izindawo ezihehayo, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
Ekugcineni, athenge amathikithi esitimela ngemali eziyinkokhelo zihlanganisa ngaphezulu, okwenza wena ukuletha umthwalo bese ukhetha izihlalo zakho ngaphandle kokukhokha izimali enkulu engeziwe.
Konke lokhu kungenxa ukusho ukuthi, ngenkathi IYurophu inenye futhi ongakhetha eziningi izihambi, lutho ishaya ezinhle uhambo ubudala isitimela.
ILondon ukuya eBrussels Izitimela ze-Eurostar
ILondon ukuya eParis Eurostar Izitimela
ILyon ukuya kuLoliwe waseLondon Eurostar
ILondon ukuya e-Amsterdam Eurostar Izitimela
Ukubhuka Ticket Yakho On A Eurostar zemininingwane
Enye yezinto ezinhle kakhulu zokuthatha isitimela uma iqhathaniswa nendiza ukuthi i-Eurostar iqala enkabeni yedolobha iye enkabeni yedolobha. Ngokungafani zezindiza ezikude ezifana London Intl futhi Paris Charles de Gaulle, isitimela yakho isuka London St-Pancras International futhi ifika Gare Du Nord, lapho ungakwazi kalula ukuhamba kuzo zonke nokuzwa phambili edolobheni.
njengoba kushiwo, zonke Eurostar amathikithi zihlanganisa izingcezu okungenani ezimbili umthwalo nesikhwama isandla. Uma ngokuletha eminingi, ungaphindeuphumeezikhangisweni ithikithi ephakeme ekilasini evumela yakho ukuletha izikhwama okwengeziwe. Ngokungqubuzanayo, isabelomali izindiza ingashaja kancane for ukubhuka zabo kokuqala, kodwa isikhwama izimali kanye isihlalo ukukhetha amacala ngokushesha tente.
Ticket izintengo lolu hambo bavame iyashintshashintsha okuningi, ngakho sincoma ukuthenga amathikithi ngokushesha nje uyakwazi. Sengisho nje, lezi amathikithi niqhubeke ukudayiswa izinyanga ezintathu kusengaphambili, Nokho kuye isizini futhi ungathola kuzo izinyanga eziyisithupha kusengaphambili. Sincoma ukuthi usebenzise yethu iwebhusayithi ukuthola futhi ukubhuka amathikithi yakho isitimela, okuyinto efuna ngokuzenzakalelayo bonke yokusungula etholakalayo ukuze intengo intengo kungenzeka, yibhange.
ILondon kuya e-Antwerp Eurostar Izitimela
ILille to London Eurostar Trains
ILondon ukuya eStrasbourg Eurostar Izitimela
ILondon ukuya eRotterdam Eurostar Izitimela
Amanani Futhi Izinhlobo Of Amathikithi
I Eurostar isitimela usebenza ezintathu-class apholile, kuye ngokuthi ibhajethi yakho. Kulabo nje ngifuna ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, amathikithi ekilasini lesibili okungaba ngcono. Labo ku Ukuhamba ngezebhizinisi kungase esikhundleni saloko ithikithi Standard Premier noma Business Premier, kokubili okukuvumela ukuba ahlale unqambothi abaqeqeshi isidlo ngenkathi kho hambo!, ngakho-ke ake sifunde okuncane ngeLondon ukuya ePitoli amathikithi wesitimela:
Uhlobo lwemali ekhokhwayo Izinsiza Imikhawulo
2 izingcezu isikhwama imithwalo kanye eyodwa esandleni kuhlanganisiwe
Isihlalo ukukhetha etholakalayo emva yokubhuka
Ayikho imbuyiselo yemali. Ngaphambi isitimela ukuhamba, ungase uyishintshe ithikithi lakho. Ushintsho Imali 40 Euro ne yokugibela umehluko osebenza. Uma ithikithi entsha engabizi kuka ithikithi yasekuqaleni, umehluko intengo ngeke ibuyiselwe.
izihlalo Ithuthukele isici legroom kakhudlwana futhi nakho premium
Isidlo ukukhanya iziphuzo uzonikezwa at esihlalweni sakho
Ayikho imbuyiselo yemali. Ngaphambi isitimela ukuhamba, ungase uyishintshe ithikithi lakho. Ushintsho Imali 50 Euro ne yokugibela umehluko osebenza. Uma ithikithi entsha engabizi kuka ithikithi yasekuqaleni, umehluko intengo ngeke ibuyiselwe.
3 izingcezu isikhwama imithwalo kanye eyodwa esandleni kuhlanganisiwe
ukudla Chef-eklanyelwe futhi champagne uzonikezwa at esihlalweni sakho
Ukufinyelela i-lounge okukhethekile ngaphambi kokuhamba
amasevisi Taxi yokubhuka ayatholakala
ukukhansela Mahhala kanye Ukuhwebelana angenamkhawulo kuze kufinyelele 60 izinsuku emva kokumuka ku yonke imizila phakathi UK, IFrance neBelgium.
ukukhansela Mahhala kanye Ukuhwebelana angenamkhawulo kuze kube ukuhamba phezu emzileni oqondile ophakathi kwe-UK naseNetherlands, plus Ukuhwebelana khulula emzileni engaqondile (Thalys / Eurostar nge Brussels) kuze kube ukuhamba.
Njengoba sike ushilo, zamanani kuyehluka kuye izinsuku zokuhamba kwakho, ngakho-ke ungafuna ukubhuka kanye ukutholakala kuvula. If you book far enough in advance, uzokhokhiswa ngifuna ukukhokha mayelana 55 Dollars ngendlela eyodwa, noma 90 Dollars nokubuya. Ilinde kuze kube umzuzu wokugcina ungakwazi ukushayela amanani isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu, nge izindleko cishe kabili kamuva uthenga ithikithi lakho. Lokhu kuyiqiniso kokubili nokubuya futhi esebenza ngendlela eyodwa amathikithi.
It sika Kuyaphawuleka ukuthi le Eurostar ayitholakali Bonke labo abaqhubeka begcine pass wesitimela, ngakho uma ufuna ukwenza lolu hambo i okuyenga futhi ezingabizi, uthenge ithikithi lakho Isitimela kusengaphambili. Ungathola izitimela amathikithi inthanethi at amawebhusayithi ahlukahlukene, Nokho kungase ithikithi isitimela amanani ulele kuqhathaniswa Londoloza Isitimela.
ICalais eya eLondon Eurostar izitimela
Bruges eLondon Eurostar Izitimela
IHague eya eLondon Eurostar Izitimela
I-Berlin eya eLondon i-Eurostar Trains
Ngena Ngezinye London St-Pancras Station
Kuye ekilasini lakho yokugibela, ungafuna ukufika esiteshini sakho sokuhamba okungenani 40-60 imizuzu ngaphambi kokuba isitimela sisuke eLondon siye paris. Uma ubhuke ithikithi lebhizinisi lokuqala elivela eLondon liye eParis, uzoba ukufinyelela lounge okukhethekile. kungenjalo, zikhona izitolo eziningi zokudla seliyatholakala ukuthi peruse. Ezinye zokudlela esizithandayo zihlanganisa:
AMT Coffee – A coffee shop elinezindawo ezimbili ngaphakathi iziteshi. It unikeza iziphuzo ngezandla futhi izinkomishi compostable ngokugcwele, okwenza imvelo ukumamatheka.
I Wemigqomo Vault – Yomdabu IsiZulu pub ukuthi izipesheli izikebhe besizulu, ale yangempela, gins, ikhofi, nemimoya. Libuye ibhulakufesi futhi pub zakudala yokugibela.
Chop'd – A yokudlela impilo-egxile, Chop'd inikeza ezihlukahlukene amasobho, salads, isitshulu futhi ezisonga zonke izinhlobo abahambi.
Esimeni usebenze kuphela okwenza uhambo usuku, esiteshini futhi izici izindawo kwesokunxele-imithwalo ngawe ukugcina imithwalo yakho. Lezi ongakhetha isitoreji zishibhile futhi ngokuvamile ukunikela enwetshiwe inkonzo amahora.
I-Cologne eya eLondon Eurostar Izitimela
I-Ghent eya eLondon Eurostar Izitimela
IMiddelburg eya eLondon Eurostar Izitimela
Ugibelile I Eurostar zemininingwane
Uma ugibelile, isikhathi esiphelele travel esuka eLondon aye Paris cishe 2 amahora 16 amaminithi. Kuhlanganiswe ne zangaphambi Ukuhamba ozofika, Imininingwane yakho uhambo isikhathi kuyoba emhlabeni 3 amahora.
Isitimela ngokwayo izici nezihlalo ejwayelekile kanye amatafula ezikuvumela umsebenzi udle kalula. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ezifinyelela ekuseni, Nokho, ngakho-ke qiniseka ukukhetha kusengaphambili uma yilokho ungathanda. Kungakhathaliseki lapho uhlala, ubhekene yibhange ukuba legroom ezinhle futhi Imigudu ukukhokhisa i amadivayisi wakho.
Njengoba kushiwo ngaphambili, kukhona khulula WiFi ugibelile, ukuze ukwazi ukuhambisana nawo wonke amakheli akho kanye nezidingo zokuxhumana. Kuye ithikithi lakho, ungase futhi baye Umqeqeshi yokudlela, lapho ungathola ukudla, iziphuzo kanye Ungadla. Uma ehlezi endlwaneni eyakhiwe unqambothi, ukudla kuyolethwa ngqo esihlalweni sakho.
U-Essen kuya kuLoliwe wase-London Eurostar
Ukufika Ngezinye Paris Gare Du Nord Isiteshi Sesitimela
Izitimela kusukela St. Pancras esiteshini sifike phakathi Paris, esiteshini Gare du Nord. Kulesi siteshi langa kuyinto wobuciko ngokwako, nge olungaphambili lwesonto okwakhelwe phakathi nawo-1800 futhi zigcinwe kahle. Ake uzinike isikhashana uphendule ukujabulela besakhiwo obheke out ukuvakashela idolobha.
Ngoba uyobe useqede check-in ngaphambi kokushiya UK ngeke kudingeke ukuqedela inqubo ukufika. Lokhu kubuye okwamanje kweqiniso ukulawula ipasipoti, Nokho nge UK kokushiya EU kungenzeka ukuthi lezi zinqubo uyoguqulwa abalulekile.
Uma ufika, uzoba enhliziyweni edolobheni, ezele okukhethwa kukho ukudla, izitolo kanye iziphuzo. Uma ukhetha ukuhamba iziteshi, uzothola eseduze Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. kungenjalo, udinga nje ukuba zizule ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi ukuthola ezinye enokudla iziphuzo e-Europe.
Ngaphakathi esiteshini sesitimela uqobo, uzothola Metro futhi Rer izitimela, kanye izitimela ukuhamba kulo France. komzila Local kanye izitimela Metro kungathatha nonke kulo enhlokodolobha French, kwabaningi iminyuziyamu, zemibukiso, kanye nezivakashi ezikhangayo ngaphakathi.
Uma ufike futhi isihloko ngqo ngaphandle lizobona ngaphambi ngena ihhotela lakho, kungase futhi kube umqondo omuhle ukusizakala ongakhetha kwesokunxele-umthwalo ezikhona ngaphakathi esiteshini sesitimela. Lezi zakhiwo isitoreji akubizi futhi kungaba inketho esihle kakhulu lezo looking ukuze wengeze izinsuku zabo.
As a holder of the Eurostar direct train ticket, uku akwazi ukuthola 2 ngoba 1 ukufinyelela eziningi zalabo kumamyuziyamu, ezingasetshenziswa ukukusindisa amakhulu ama-dollar.
IFrankfurt eya eLondon Eurostar Izitimela
IMoutiers eya eLondon Eurostar Izitimela
IMarseilles eya eLondon Eurostar Izitimela
Izincwajana zemininingwane Times For London Ukuze Paris Nge Eurostar
I Eurostar siphela ngokuvamile, nabantu abafika ku 19 Ukusuka ngelanga kuye namaholide ngezimpelasonto. Isitimela sokuqala kosuku isuka ngo 05:40 bese uthatha ingqikithi 2 amahora 37 amaminithi. Lokhu ngokuvamile kuba omunye amathikithi eshibhe etholakalayo, ngakho uma ungumuntu engakwenqeni avuka ekuseni ungagcina imali futhi amabombo out at sekhefu kokusa. Enye inzuzo yale ukuhamba ekuseni wukuthi kwesikhathi sakho sokufika Paris kuyinto 09:17, okusho ukuthi babe usuku lonke ngaphambi kwakho nganoma yikuphi imisebenzi ungathanda ukukhetha.
izikhathi Umzila beyizo ngehora noma ngaphezulu, okukunikeza inala ongakhetha ongakhetha kuwo. I isitimela sokugcina ebusuku isuka ngo 18:31 futhi efika 21:47, enishiyela esiningi ukuze uthole ehhotela yakho noma ngisho amabombo ukuze ukudla sebusuku kanye Ukubheka at izibani akhazimulayo i-Eiffel Tower. Lezi izitimela nasebusuku zingase zenziwe olele izimoto, okuyizinto kuyindlela enhle ubambe kwamaminithi ambalwa wobuthongo ngaphambi kokuqhubeka nohambo lwakho. Ngaphezu kwalokho, ezinye izitimela angahamba phakathi izindawo athandwayo ubusuku.
IDen Helder eya eLondon Eurostar Izitimela
I-Maastricht eya eLondon Eurostar Izitimela
IDijon ukuya eLondon i-Eurostar Trains
Bonn to London Eurostar Izitimela
Eminye Imigwaqo Nge-Eurostar Sitimela Esingeyona iLondon To Paris
Nakuba lesi sihloko sigxile ikakhulu ukuhamba phakathi St. Pancras International Station kanye Gare Du Nord, i-Eurostar futhi usebenza eziningana imizila ngqo ukusuka eLondon:
Brussels – Izitimela ukusebenzisa zonke 90 amaminithi 2 amahora. Kuthatha nje phezu 2 amahora ukufinyelela Brussels Midi / esiteshini Zuid.
Calais / Frethun- Izitimela ukusebenzisa ngehora noma ngaphezulu kusukela London kanye Imininingwane isitimela travel esingaphezudlwana nje kwehora.
ezincane- Izitimela ushiye cishe ngehora ukuze Lille, esenyakatho France. Kukhona uxhumano lula inethiwekhi French TGV ngawe ukudluliswa. Uhambo isikhathi cishe 1.5 amahora.
Disneyland Paris – Izitimela ukusebenzisa izikhathi eziningana ngesonto unyaka wonke futhi nsuku zonke ngesikhathi samaholide okuvalwa kwezikole. I sesitimela kwesokudla ngaphandle Disneyland yokungena. Uhambo kuthatha ngaphansi 3 ingqikithi yamahora.
Lyon, Avignon, futhi eMarseilles- Kuwo wonke unyaka ka isitimela usebenza kusukela 1 ukuze 5 izinsuku ngeliviki, nokho uthi ngesizini abathintekayo ngakho qiniseka ukuthi egijima uma udinga. It uyama at Lyon Ingxenye-Dieu esiteshini (4.75 amahora), Avignon TGV esiteshini (6 amahora) futhi eMarseilles iSt Charles esiteshini (6.5 amahora).
Amsterdam futhi Rotterdam – Isevisi entsha eqale e 2018, wena umane uthathe esisodwa izitimela nsuku zonke ukuze Amsterdam, okubandakanya stop e Rotterdam. Nhlobo uhambo isikhathi imayelana 4 amahora.
Zikhona nezinye izindlela ezithile zonyaka etholakalayo imisebenzi efana Ukushushuluza ebusika, ngakho qiniseka ukuthi uhlole emuva kaningi ukuze ubone uma sevisi egijima.
Kuba njalo kungenzeka ukufinyelela kwezinye izindawo eYurophu sisebenzisa kokuma olulodwa nokuqhubeka eqhubeka esuka iziteshi etholakala Lille, Brussels, futhi Paris. Ukuthola amathikithi esitimela kulula futhi kudinga kuphela uhambo olulodwa.
Ngokufanayo, uma usohambweni ezilethwa eLondon zivela kwenye indawo e-UK, ungakhetha ukuqala uhambo lwakho Eurostar at Ebbsfleet International Zokusebenzela noma Ashford International Station esikhundleni St. Pancras. Lokhu kusiza ngokukhethekile kulabo nge izimoto, njengoba Ashford inikeza egalaji lokupaka izimoto futhi ukufinyelela ngqo esiteshini sesitimela.
Incwadi Amathikithi Nge Gcina Isitimela Ukuze London Yakho Ukuze Paris zemininingwane
Ukucinga indawo yethu ukuze amathikithi ncwadi konke izindawo engcono yaseYurophu, kufaka Belgium, Italy, Switzerland kanye UK (kuhlanganise London eParis Isitimela Eurostar). search yethu injini yakhelwe eqela ngaphezulu kuwo wonke amathikithi futhi zihlanganisa ayikho imali yokubhuka. Senza kube lula ngawe ukuba uthenga ngokwamukela ezindleleni eziningi lokuhola imali, kuhlanganise credit card, Giropay, Ideal futhi abaningi.
Ngakho, yini isizathu sakho travel, noma ngabe ohamba yedwa noma nabanye, kuthathe amaminithi ambalwa ukuze useshe athenge amathikithi esitimela ngemali ku Gcina a zemininingwane, okuyinto izipesheli amanani aphansi, yibhange.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / nl noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#garedunord #stpancras eurostar London Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelfrance travelparis uktravel